A Wednesday! (2008) | MM Movie Store
Action Bollywood Crime Drama
“လူသားစဈမှနျခဲ့ရငျ ဇီဝနျခွှတေဲ့ အလုပျကို သာယာနမှောမဟုတျဘူး ” ဒါမှမဟုတျ အဲ့ဒီစကားပွောခဲ့တဲ့ဗုဒ်ဓဟူးနလေ့ေးတဈနေ့
အိန်ဒိယ၏ ဇာတျကားတျောတျောမြားမြားသညျ တညျ့မတျစလေိုသော သဘောတရားအရငျးခံရငျး တရားရေးမဏ်ဍိုငျကို ကွုံရငျကွုံသလိုသရျောလိုကျကွသညျ။
IMDB – 8.1 အထိ ရရှိထားပွီး ဝဖေနျရေး အရလညျး တျောတျောအောငျမွငျခဲ့သညျ့ ကားမြိုးဖွဈသညျ။ဇာတျလမျး အကဉျြးအားဖွငျ့ ဆိုသျော တဈနသေ့ော ဗုဒ်ဓဟူး နလေ့ေးတှငျသာ ဖွဈပကျြခဲ့၏။ ထိုနလေ့ေးတှငျ ရဲကျောမရှငျနာရာဟိုးလျ ထံသို့ အမညျမသိ ဖုနျး တဈခု ဝငျလာသညျ။
အမညျ ကို A ဟု သတျမှတျပါစို့။ A က မွို့၏ နရောကွီးငါးနရောတှငျ ဗုံးထောငျ ခဲ့ကွောငျး ဆိုသညျ။A ၏ ရညျရှယျခကျြမှာ နာမညျကွီး အကွမျးဖကျသမား လေးဦးအား လှတျပေးရေးဖွဈသညျ။ ပထမ အစတှငျ ရာဟိုးလျ က A ကို မယုံကွညျခဲ့ပေ။ဖုနျးနှောငျ့ယှကျသူ တဈဦးအဖွဈသာ သတျမှတျခဲ့သညျ။
သို့သျော ရဲစခနျးအိမျသာ၌ ထောငျခဲ့သော ဗုံးတဈနရောကို ဖှငျ့ပွောလိုကျသောအခါမှ ရာဟိုးလျယုံကွညျခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ နညျးပညာအကူအညီဖွငျ့ A ၏ တညျနရောအားစုံစမျးကွသညျ။ A ကား မညျသူနညျး ဟု စုံစမျးခဲ့ကွသညျ။
ရဲမှတျတမျးမြားအရလှတျမွောကျနသေော အကွမျးဖကျသမားမြား ရှိနသေောကွောငျ့ ရာဟိုးလျအနနေဲ့ A သညျ အကွမျးဖကျခေါငျးဆောငျ ဖွဈမညျဟု မှတျယူခဲ့သညျ။A အနနေဲ့လညျး ကြှမျးကငျြသငျ့တငျ့သော နညျးပညာ ရှိနေ၍ Sim card အမြိုးမြိုး တညျနရော အမြိုးမြိုး ပွောငျးနိုငျခဲ့သညျ။
အကွမျးဖကျသမားလေးယောကျ ကို တဈနရောတညျး တဈစုတစညျး မရပါက ကနျြရှိနသေညျ့ ငါးနာရီအတှငျး ဗုံးဖောကျ ခှဲရနျ ကွုံးဝါးခဲ့သညျ။ဤသိူ့ဖွငျ့ ရာဟိုးလျ နှငျ့ အမညျမသိ ဖုနျးချေါသူ တို့ အားပွိုငျ ဇာတျရှိနျတကျလာခြိနျမှာတော့ …………? ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာမညျနညျး။
A ဟာ မညျသူနညျး။ မညျသို့သော မကျြနှာဖုံးနဲ့ တရားရေး ကဏ်ဍ ဆီ ခဉျြးနငျးလာခဲ့ပါသနညျး။ ဤဇာတျကားသညျ အလှညျ့အပွောငျး နှငျ့ လူ့စိတျကို ဖှငျ့ဟလိုကျသညျ။“ငါမှ မဆိုငျ “ဟူသော စိတျဓာတျနှငျ့ နိုငျငံသားကောငျး မဖွဈနိုငျခွငျးကိုလညျး ပွောပွသညျ။
“လူသားစစ်မှန်ခဲ့ရင် ဇီဝန်ခြွေတဲ့ အလုပ်ကို သာယာနေမှာမဟုတ်ဘူး ” ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီစကားပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လေးတစ်နေ့
အိန္ဒိယ၏ ဇာတ်ကားတော်တော်များများသည် တည့်မတ်စေလိုသော သဘောတရားအရင်းခံရင်း တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကို ကြုံရင်ကြုံသလိုသရော်လိုက်ကြသည်။
IMDB – 8.1 အထိ ရရှိထားပြီး ဝေဖန်ရေး အရလည်း တော်တော်အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကားမျိုးဖြစ်သည်။ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းအားဖြင့် ဆိုသော် တစ်နေ့သော ဗုဒ္ဓဟူး နေ့လေးတွင်သာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့၏။ ထိုနေ့လေးတွင် ရဲကော်မရှင်နာရာဟိုးလ် ထံသို့ အမည်မသိ ဖုန်း တစ်ခု ဝင်လာသည်။
အမည် ကို A ဟု သတ်မှတ်ပါစို့။ A က မြို့၏ နေရာကြီးငါးနေရာတွင် ဗုံးထောင် ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။A ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နာမည်ကြီး အကြမ်းဖက်သမား လေးဦးအား လွှတ်ပေးရေးဖြစ်သည်။ ပထမ အစတွင် ရာဟိုးလ် က A ကို မယုံကြည်ခဲ့ပေ။ဖုန်းနှောင့်ယှက်သူ တစ်ဦးအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ရဲစခန်းအိမ်သာ၌ ထောင်ခဲ့သော ဗုံးတစ်နေရာကို ဖွင့်ပြောလိုက်သောအခါမှ ရာဟိုးလ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နည်းပညာအကူအညီဖြင့် A ၏ တည်နေရာအားစုံစမ်းကြသည်။ A ကား မည်သူနည်း ဟု စုံစမ်းခဲ့ကြသည်။
ရဲမှတ်တမ်းများအရလွတ်မြောက်နေသော အကြမ်းဖက်သမားများ ရှိနေသောကြောင့် ရာဟိုးလ်အနေနဲ့ A သည် အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်မည်ဟု မှတ်ယူခဲ့သည်။A အနေနဲ့လည်း ကျွမ်းကျင်သင့်တင့်သော နည်းပညာ ရှိနေ၍ Sim card အမျိုးမျိုး တည်နေရာ အမျိုးမျိုး ပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်သမားလေးယောက် ကို တစ်နေရာတည်း တစ်စုတစည်း မရပါက ကျန်ရှိနေသည့် ငါးနာရီအတွင်း ဗုံးဖောက် ခွဲရန် ကြုံးဝါးခဲ့သည်။ဤသိူ့ဖြင့် ရာဟိုးလ် နှင့် အမည်မသိ ဖုန်းခေါ်သူ တို့ အားပြိုင် ဇာတ်ရှိန်တက်လာချိန်မှာတော့ …………? ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမည်နည်း။
A ဟာ မည်သူနည်း။ မည်သို့သော မျက်နှာဖုံးနဲ့ တရားရေး ကဏ္ဍ ဆီ ချဉ်းနင်းလာခဲ့ပါသနည်း။ ဤဇာတ်ကားသည် အလှည့်အပြောင်း နှင့် လူ့စိတ်ကို ဖွင့်ဟလိုက်သည်။“ငါမှ မဆိုင် “ဟူသော စိတ်ဓာတ်နှင့် နိုင်ငံသားကောင်း မဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလည်း ပြောပြသည်။
365 Days – Link 2